W003 Wireless Charger nokuda iPhone X uye Apple Watch. - China Shenzhen Macverin Electronics
W003 Wireless Charger nokuda iPhone X uye Apple Watch.
MACVERIN W-003 iyo pamwe girazi hukawanika uye Aluminum chiwanikwa pasi pabutiro. It adopts Wireless ndinorova mureza WPC-Qi1.2 uye Apple murinde i-Watch Protocol. Zvakakodzera Wireless uchiraira pamusoro mobile phones, digitaalinen, kukurukurirana, GPRS, motokari, fenicha, moto kudzivirirwa uye isapinda zvigadzirwa. Rakashandiswa bhatiri Wireless uchiraira kana Wireless simba zvitengeswa. Rutsigiro azvino Apple maserura uye Samsung Mobile Wireless mundiro specifications.Non-kutsanya ndinorova dzenhare chete kushanda W ...
MACVERIN W-003 iyo pamwe girazi hukawanika uye Aluminum chiwanikwa pasi pabutiro. It adopts Wireless ndinorova mureza WPC-Qi1.2 uye Apple murinde i-Watch Protocol. Zvakakodzera Wireless uchiraira pamusoro mobile phones, digitaalinen, kukurukurirana, GPRS, motokari, fenicha, moto kudzivirirwa uye isapinda zvigadzirwa. Rakashandiswa bhatiri Wireless uchiraira kana Wireless simba zvitengeswa. Rutsigiro azvino Apple maserura uye Samsung Mobile Wireless mundiro specifications.Non-kutsanya ndinorova dzenhare chete kushanda pamwe QI 5W nzira.
Model No. W-003 Type: Fast Charging 2 muna 1 Wireless mundiro ikanyanya
vanozivikanwa: MACVERIN Body Materials: Aluminum chiwanikwa nechepasi Chassis negirazi pamusoro penyika.
Nzvimbo Origin: China Neruvara: Black
Round dhayamita 110mm, ukobvu 10.6mm, Net uremu: 271.5g; Cable kureba: 1 M od Width: 3mm;
Support Apple uye Samsung akangwara dzerunhare Wireless kuraira, 7.5W nokuti iPhone uye 10W nokuda Samsung mabasa apo unobatanidza pamwe QC2.0 uye QC3.0 ndiro izvo mvumo ne QC mureza Protocol.
Previous: Macverin C002 Dual Mheni mahwanda nokuda IPHONE
Next: U36 Type C makono USB uye Lan hadzi Adapter
Macverin W-001 Wireless mundiro nokuda apuro yokurinda
Macverin W-002 kutsanya kuchaja Wireless mundiro
Mini Airpower Wireless Charginer Pad nokuda iPhone ...
Dual Mheni Headphone Audio & Charge SP ...
USB C nomusimboti kuna 1000Mbps Ethernet uye 3 * USB 3.0